रोचक खवर Archives - Purwanchal Today
झापा,यदि तपाईलाई कसैंले आनन्दले सुतेर टिभी वा फिल्म हेर्ने, भिडियो गेम खेल्ने, पढ्न पाउने जागिर भेटियो भने को खुसी नहोला र ? नासा र युरोपियन स्पेस एजेन्सी (एएसए)शून्य गुरुत्वाकर्षणको परीक्षणका लागि यस्तै २४ जनाको खोजी गरेको छ । यो परीक्षण ६० दिनसम्म चल्नेछ । यसका लागि प्रत्येकले तलब पनि पाउनेछन् । यो परीक्षण जर्मनीमा गरिनेछ । यसमा २४ स्वयंसेवकको आवश्यकता छ जो १२–१२ को समूहमा हुनेछन् । सबैले...
डा. राजेन्द्र / म १९ वर्षको भए । म १३ वर्षको हुँदा कुकुरसँग यौनसम्पर्क भएको यियो । दुई–तीन पटक लिङ्ग पसाउँदा वीर्य स्खलन होला जस्तो भएर बाहिर निकालेको थिएँ । त्यसको केही महिनापछि मेरो वीर्यमा ठोस पदार्थ (चामल जस्तो) देखियो । कुकुरसँग सम्पर्क हुँदा यस्तो हुन्छ र ? अनि यसबाट कुनै यौनरोग (SITI) सर्छ ? यौनरोग (SITI) पिसाब जचाउँदा थाहा हुन्छ भनिन्छ, पिसाबमा यसको असर देखिन्छ ? असर परेको वा नपरेको कसरी थ...
बेइजिङ , चीनको झियामेन सहरमा एक महिलाले यस्ता दुई जुम्ल्याहा सन्तानलाई जन्माइन्, जसका पिता अलग अलग हुन् । डीएनए टेस्टमा यस्तो कुरा खुलासा भएको हो । महिलाले आफ्ना श्रीमानसँगै अर्का पुरुषसँग पनि सम्बन्ध स्थापित गरेको पनि उक्त रिपोर्टसँगै खुलासा भएको बताइएको छ । बावुआमा बनेको उक्त जोडी जब आफ्ना सन्तानको नाम प्रहरीकहाँ दर्ता गराउन गए त्यसबेला यस्तो कुराको खुलासा भएको हो । प्रहरीले डीएनए टेस्ट गराउन...
झापा, यौनसम्पर्कलाई लिएर विश्वमा हरेक दिन नयाँ र अनौठो तथ्य सार्वजनिक हुने गर्दछ । बेलायतमा गरिएको एक सर्वेक्षणले शनिबारको रात महिलाहरु सबैभन्दा बढी सेक्सी हुने गरेको रहस्य बाहिर ल्याएको छ । बेलायतको हेल्थ एण्ड ब्युटी रिटेलर सुपर डगको अध्ययनअनुसार धेरै महिला सातामा एकदिन आफूलाई आफ्नो काबुमा राख्न सक्दैन । त्यो दिन भनेको शनिवारको रात हो । अध्ययनका अनुसार महिला आफुलाई ‘सिडक्टिव फिल’ गराउन विभिन्न...
पछिल्लो समय विश्वमा यौन सम्बन्धी कयौं शीर्षकमा रिसर्च हुन थालेका छन् । सेक्सका मामिलामा जानकार तथा विज्ञहहरुले सर्वसाधरणहरुसँग धारण बुझेर बिभिन्न तथ्यहरु सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् । विज्ञहरुको अनुमानलाई हेर्ने हो भने एक वयस्क पुरुषले एक रातमा कति पटक सम्म सेक्स गर्न सक्छन् भन्ने अझै पनि एकिन भन्न सकिन्न । तर, यौन सम्पर्कलाई खानपानले पनि असर गर्ने हुँदा ठ्याक्कै यति नै पटक हुन्छ भन्ने हुँदैन । ...
झापा, यौन सम्पर्क कुन समयमा गर्दा उपयुक्त हुन्छ ? यो सामान्य प्रश्न हो यसको उत्तर पनि मानिसहरुले अत्ति सरल रुपमा दिन्छन । जब चाहाना हुन्छ तब दुबैजनाको सहमतिमा सम्बन्ध राख्नुपर्दछ । यो कुरा पनि ठिक छ तर बिहान यौन सम्बन्ध राख्नाले स्वास्थमा निकै नै फाइदा पुग्ने तथ्य सार्वजनिक भएको छ । हेल्थ एन्ड फिटनेस कम्पनी फोर्जा सप्लीमेन्टको एक अध्ययनले विहानको समयमा यौन सम्बन्ध राख्नाले तनाव कम हुने र दिनको सुर...
झापा, विश्वमा हरेक दिन नयाँ र फरक कामहरु भइरहेका हुन्छन् । यस्ता घटनाहरु जुन हामीले सुन्दा सहजै विश्वास गर्न सकिदैन । विश्वमा पतिपत्नीको सम्बन्धलाई सबैभन्दा पवित्र नाता मानिन्छ । त्यसमाथि नेपाल तथा भारतमा त सात जन्मसम्मको सम्बन्ध भएको विश्वास गर्ने गरिएको छ । हाम्रो देशमा विवाहपूर्व गरिने शारीरिक सम्बन्धलाई समाजले हालसम्म स्वीकारेको छैन । अर्को सत्य के पनि हो भने नेपालमा बिबाह भन्दा पहिले यौन स...
कुखुराको फन्दामा स्याल !
झापा, चतुर फ्याउरोले कुखुरालाई फकाएर आफ्नो गुफाभित्र लगेर उनीहरुलाई खाएको कथा त सबैले पढेकै छ होला । हाम्रो गाउँ टोलमा पनि स्यालले कुखुरा खाएको नै हेर्न र सुन्न मिल्छ । तर फ्रान्समा भने कथाले अर्कै रुप लिएको छ, अर्थात कुखुराहरु मिलेर स्याललाई मारेका छन् । फ्रान्सको एक कृषि स्कुलका विद्यार्थीहरुले जब कुखुरा फार्ममा लगाएको तारबारमा एउटा स्याल मरेको देखे उनीहरु अचम्म परे । घाम डुब्नेबेला स्याल कु...
दाजु नै वहिनीका लागि सेक्स टोय किन्न गएपछि ……..
झापा, यौनका बारेमा व्यक्तिपिच्छे फरक९फरक बुझाइ हुन सक्छ । तर एउटा समान धारणा के हुन्छ भने सबै यसमा गोप्यता चाहन्छन् । यौन शरीरको यस्तो आवश्यकता र चाहना हो जसलाई मान्छेले सधैँ नियन्त्रणमा नराख्न पनि सक्छ । चाहेको वेला यौन चाहना पूर्ति नहुन पनि सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा विकल्पका रूपमा सेक्य टोयहरू रोजाइमा पर्न थालेका छन् । नेपालमा पनि सेक्स टोयको माग बढ्दै छ । करिब चार महिनाअघिको कुरा हो । धनगढीकी ...
तीन पटकसम्म यौनसम्पर्क गर्नेको आयु १० वर्ष बढ्ने !
झापा, फागुन २६ । मानिसहरुका लागी हरेक कुरा सिमित मात्रामा गर्यो भने त्यसले फाइदा पुग्छ । नेपाली समाजमा यौनसम्पर्कलाई अत्ति साँघुरो रुपमा बुझ्ने गरिएको छ । सामान्य रुपमा बुझ्ने हो भने, यौनसम्पर्क एकप्रकारको शारीरिक व्यायम हो । स्वस्थ्य रुपमा गरिएको यौनसम्पर्कले मुटुजन्य रोगीहरुलाई समेत राम्रो प्रभाव पार्छ । त्यतिमात्रै होइन नियमित रुपमा मिलाएर गरिएको यौनसम्पर्कले हृदयघातको सम्भावना समेत कम हुनु ...